Minista Bartlett na-aga nzukọ ọgbakọ UNWTO dị mkpa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Minista Bartlett na-aga nzukọ ọgbakọ UNWTO dị mkpa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ gbasara Jamaica • nzukọ • News • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Nzukọ izugbe ga-elekwasị anya na mmepụta ọhụrụ, agụmakwụkwọ, mmepe ime obodo, na ọrụ njem nlegharị anya n'ịba ụba. Na mgbakwunye, mmemme ahụ gụnyere nnabata nke mmezigharị ndị a tụrụ aro na Nhazi Iwu Mgbakwunye UNWTO, asọmpi ikpeazụ nke otu ụmụ akwụkwọ UNWTO, yana Nhọpụta nke odeakwụkwọ ukwu UNWTO maka oge 2022-2025.
"Ihe omume a ga-egosipụtakwa asọmpi vidiyo, nke gụnyere edemede abụọ: Akụkọ pụrụ iche nke Nkwụsị Nlegharị Nlegharị anya na Nkwalite Njem Nleta na Afọ iri nke Omume. Mgbakọ izugbe bụ ọgbakọ UNWTO bụ isi yana ebe mba ndị otu ga-eji nabata mmemme ọrụ afọ abụọ nke UNWTO na mmefu ego maka 2022-2023, "Minista ahụ kọwara.
UNWTO nwere obodo 159, yana Nzukọ Ezumezu bụ ọgbakọ kachasị elu nke UNWTO. A na-eme nnọkọ nkịtị kwa afọ abụọ ma ndị nnọchiteanya nke ndị otu zuru oke na ndị mmekọ na-abịa ya.
“Mgbakọ General bụ nzukọ kacha mkpa nke ndị isi njem nlegharị anya na ndị nnọchi anya ngalaba nzuzo dị elu n'ụwa niile. Ọ bụ isi nzukọ nke UNWTO wee zukọta iji kwado mmefu ego na mmemme ọrụ na isiokwu arụmụka dị mkpa maka mpaghara njem nlegharị anya, "Minista Bartlett kọwara.
Njem nleta Jamaica Minista Bartlett ka akwadoro ịlaghachi n'agwaetiti ahụ na Disemba 5, 2021.